Ahịa kacha mma na laptọọpụ egwuregwu Black Friday
Na-achọ azụmahịa na laptọọpụ Gaming maka Black Friday? Nke a bụ nhọrọ nke mbelata kacha mma dị ugbu a:
1 Black Friday egwuregwu laptọọpụ amụọ
2 Laptọọpụ egwuregwu ASUS na-ere maka Black Friday
3 Laptọọpụ egwuregwu MSI na-ere maka Black Friday
4 Laptọọpụ egwuregwu HP Omen na ọrịre maka Black Friday
5 Laptọọpụ egwuregwu Lenovo na-ere na Black Friday
6 Kedu ihe kpatara o ji baa uru ịzụta laptọọpụ egwuregwu na Black Friday?
7 Kedu ihe bụ laptọọpụ egwuregwu kacha amasị na Black Friday?
8 Ogologo oge ole ka Black Friday na-adị na laptọọpụ egwuregwu
9 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ egwuregwu na Black Friday
Black Friday egwuregwu laptọọpụ amụọ
ASUS ROG Strix G17…
Laptọọpụ egwuregwu ASUS na-ere maka Black Friday
Black Friday enye
La Asus ika Ọ bụ otu n'ime ndị kacha nwee ekele na ụwa nke kọmpụta, ebe ọ bụ na ọ na-arụpụta nne nne kacha mma. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ laptọọpụ egwuregwu nwere bọọdụ ahụ n'ime, họrọ otu n'ime ụdị ya. Ndị na-emepụta Taiwanese jisiri ike na-eto eto ma nweta nkwado n'etiti nnukwu ụlọ ọrụ laptọọpụ. Na ekele niile maka uru ya dị egwu maka ego, ngwaike ọgbara ọhụrụ maka ịrụ ọrụ egwuregwu kacha mma, yana ọmarịcha imewe.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịzụta otu n'ime ngwaahịa ndị a n'oge Black Friday, ị nwere ike ịhụ ha na nnukwu ahịa. Nke a, yana ọnụ ahịa agbanweela nke ụdị ndị a nweburu, ga-eme ka ị bịaruo nso na egwuregwu n'ọnụ ahịa ị na-agaghị echetụ n'echiche.
Ị ga-ahụ ego n'usoro nke laptọọpụ egwuregwu ASUS ROG (Republic of Gamers), nwere ụdị dị ike na nke dịgasị iche iche, na-ejikọta ngwaike arụ ọrụ dị elu yana ngwọta jụrụ oyi nke ukwuu.
Ị nwekwara laptọọpụ egwuregwu ASUS TUF Egwuregwu mbelata ego, usoro ọzọ gbakwasara iji nye ihuenyo ọsọ dị elu, eserese asọmpi dị ukwuu, ịdịte aka dị ukwuu, yana ahụmịhe dị egwu n'ezie. Ya mere, ha bụ oke nhọrọ maka ndị ọrụ na-achọ ihe ndị ọzọ.
Laptọọpụ egwuregwu MSI na-ere maka Black Friday
MSI GF63 dị mkpa 11UC-447XES...
MSI (Micro-Star Mba) Ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta elektrọnik kacha ukwuu na Taiwan, onye obodo ASUS na otu n'ime ndị na-emegide ya na ngalaba nne na nna yana ngwaahịa dịka laptọọpụ egwuregwu. N'ezie, ụlọ ọrụ a, n'adịghị ka ndị ọzọ, lekwasịrị anya na akụrụngwa maka ndị egwuregwu nwere tandem Intel-NVIDIA. Ha nwere ụfọdụ ụdị anụ ọhịa kachasị mma n'ihe gbasara arụmọrụ na ahịa, mana nke ahụ bụkwa nke a na-ahụ anya na ọnụ ahịa ha dị elu.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta otu n'ime ndị a egwuregwu laptọọpụ na chekwaa narị narị euro, ị nwere ike ichere Black Friday N'afọ a, ịzụrụ ahịa kacha mma na GT Titan, GS Stealth, GE Raider, GP Leopard, GL Pulse na Crosshair, GF Katana na Sword series, wdg. N'ime afọ ndị ọzọ, ha nwere ike ghara kpamkpam na mmefu ego gị, yabụ na ị gaghị atụfu ohere ...
Laptọọpụ egwuregwu HP Omen na ọrịre maka Black Friday
Egwuregwu HP Pavilion ...
Onye na-emepụta teknụzụ na-ewu ewu HP edebanyela aha ma wepụta akara nke ya maka ndị egwuregwu. Aha ya Omen, ma ị nwere ike ịhụ kọmpụta egwuregwu nwere atụmatụ stratospheric. Dị ka ASUS, ha nwere ụdị ụdị dị iche iche (Omen 15, 16, 17, Victus, wdg), na otu dabere na AMD na Intel ịhọrọ ọkacha mmasị.
Kọmputa ndị a na-enye ihe karịrị kọmpụta HP ndị a na-ahụkarị, ọbụna karịa ụdị akara egwuregwu nke ụlọ ọrụ North America a na-ere n'okpuru akara HP. Ya mere, ha nwekwara ike inwe ọnụ ahịa gafere 1000 euro. Daalụ Black Friday ego, ụfọdụ nwere ike iru 20%, ị nwere ike ịchekwa narị narị euro ma nweta ụfọdụ ụdị maka 800 ma ọ bụ 900 euro, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụahịa nke ụfọdụ laptọọpụ nkịtị ...
Laptọọpụ egwuregwu Lenovo na-ere na Black Friday
Egwuregwu Lenovo IdeaPad 3 ...
Lenovo bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kọmputa kachasị ukwuu n'ụwa, ndị isi n'akụkụ ụfọdụ dị ka supercomputing. A maara akara a nke ọma maka ịnye akụrụngwa nwere uru dị egwu maka ego, yana nkọwa nke ụdị ndị ọzọ anaghị enyekarị yana ndị ọrụ na-eburu n'uche. N'ụzọ doro anya, mgbe ị na-aga na kọmpụta laptọọpụ egwuregwu, ọnụ ahịa na-ebili, yabụ Black Friday nwere ike ịhapụ gị ụdị ndị a karịa ọnụ ala, na-etinyeghị nnukwu ego.
Akụrụngwa egwuregwu gị a na-akpọ ha Legion, ma ị nwere ike ịhụ ha na nha ihuenyo dị iche iche, yana usoro dabere na AMD na Intel ịhọrọ site na, yana ọnụahịa ndị nwere ike ịdị site na 1000-odd euros na 2000 na ụdị arụmọrụ kachasị elu. Ya bụ, ọnụ ahịa dị n'etiti oke dị ọnụ ala na-eche na ọ bụ obere maka ndị egwuregwu. Ha ga-adịkwa ọnụ ala karịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ohere Black Friday na-enye, yana ọnụ ahịa na mbelata ihe ruru 20% ma ọ bụ karịa.
Kedu ihe kpatara o ji baa uru ịzụta laptọọpụ egwuregwu na Black Friday?
Dị ka ị hụworo, egwuregwu laptọọpụ Ha na-agụnye ngosipụta panel nke dị elu, ọnụego ume ọhụrụ dị elu, yana oge nzaghachi ngwa ngwa. Ha na-agụnye ndị nrụpụta ọgbara ọhụrụ na ụdị arụmọrụ kachasị elu nke enwere ike ịhụ na ahịa, yana kaadị eserese kacha mma raara onwe ya nye na ikike nchekwa dị elu. Na nkenke, ihe niile onye na-egwu egwuregwu kwesịrị inwe ike ịgba ọsọ aha egwuregwu vidiyo kachasị ọhụrụ, ọbụna ndị AAA, na-enweghị ihe mgbochi na-enweghị iwetu ntọala ndịna-emeputa.
na egwuregwu laptọọpụ Ha nwere usoro uru nke na-eme ka ha dị oke ọnụ. N'ozuzu, ha nwere ike si na € 800, ụfọdụ ndị ọzọ obi umeala ruo puku kwuru puku euro na ndị ọzọ. Ọnụ ego nke ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike imeli, ọ gwụla ma ha chere ohere Black Friday na-eweta, ebe ị nwere ike ịchekwa ọbụna narị narị euro na ịzụrụ ma nweta akụrụngwa ntụrụndụ gị dị ọnụ ala.
Fun ọ dịtụghị ọnụ ala karịa n'ụbọchị a, yabụ echefula na ịchụ nta ego kacha mma...
Ihe niile a na-akwụ ụgwọ, n'ezie, yabụ ọ bụrụ na laptọọpụ nkịtị nwere ike na-eri n'etiti € 500 na € 700 na nkezi, na-ewepụ ụfọdụ, laptọọpụ egwuregwu. ha na-erikarị ihe karịrị 1000 euro n'ọtụtụ oge, na-eru 3000 ma ọ bụ karịa n'ọnọdụ ndị dị oke njọ. Ọ bụrụ na ị chere maka ịzụrụ gị na Black Friday, ọbụlagodi na mbelata ahụ abụghị ihe karịrị 20%, ọ ga-echekwa ihe ruru narị narị euro na ịzụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ihe atụ nke ihe dị ka euro 1000 nwere ike na-efu gị ihe dị ka euro 800, ebe otu n'ime ihe karịrị euro 2000 nwere ike ịnwe ego nke ga-adị nso 500 euro obere, nke bụ nchekwa obi ọjọọ ...
Kedu ihe bụ laptọọpụ egwuregwu kacha amasị na Black Friday?
N'oge Black Friday, na n'èzí nke ụbọchị a, otu n'ime ngwa laptọọpụ egwuregwu kachasị amasị nke ndị ọrụ na-achọkarị, n'agbanyeghị ụdị ahụ, na-enwekarị njirimara a kapịrị ọnụ:
Ọgbọ ọhụrụ Intel Core i7 ma ọ bụ AMD Ryzen 7 processor.
NVIDIA GeForce RTX 3060 kaadị eserese raara onwe ya nye.
Ihuenyo 17-inch IPS nwere ọnụego ume ọhụrụ 240 Hz.
Ebe nchekwa RAM nke ihe dịka 16 GB.
Na otu ụdị nchekwa SSD.
Ahụigodo backlit RGB, yabụ ị nwere ike ịhụ igodo ọbụlagodi na ọnọdụ ọkụ dị ala.
N'oge Black Friday ị nwere ike ịhụ atụmatụ ndị a, nke dị mma maka egwuregwu vidiyo ugbu a. na ire ere kwuru na mbụ.
Ogologo oge ole ka Black Friday na-adị na laptọọpụ egwuregwu
El Black Friday, ma ọ bụ Black Friday, bụ Nọvemba 26, 2022. Ụbọchị ebe ị nwere ike ịhụ mbelata ego dị egwu na laptọọpụ egwuregwu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ihe nlereanya ị na-achọ na ọrịre n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ị na-echefu ya, ọ pụtaghị, ma ọ bụ na ịchọtaghị onyinye, cheta na ị nwere ohere nke abụọ ọzọ na ụlọ ahịa ịntanetị na Monday na-esote. : Cyber ​​​​Monday.
Chetakwa na ụfọdụ ụlọ ahịa na nyiwe, dị ka Amazon, nwekwara ha na-agbatịkarị onyinye karịa ụbọchị abụọ ahụ, na ha na-agbatịkwu nkwalite ruo izu niile, yabụ ị nwere ike ịmụrụ anya mgbe niile ịchụ nta azụmaahịa kacha mma na ngwaahịa egwuregwu.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ egwuregwu na Black Friday
para zụta laptọọpụ egwuregwu na mbelata N'oge Black Friday, echefula ileba anya na ihe ọkụ ọkụ niile a ga-ewepụta n'ụlọ ahịa dịka:
Amazon: Igwe ikpo okwu America ga-amalite ịmalite inye aka ekpe na aka nri n'ime izu, mana ọ ga-echekwa ọpụrụiche maka Black Friday na Cyber ​​​​Monday. Nnukwu ohere iji nweta laptọọpụ egwuregwu nke ika na nhazi ọkacha mmasị gị, na-azọpụta ọtụtụ narị euro. Ọ bụrụ na ị bụ Prime, ị ga-enwe mbupu n'efu, na nnyefe ngwa ngwa ka ịmalite ịnụ ụtọ ozugbo enwere ike ...
Ụlọikpe Bekee: yinye hypermarket a nke Spanish nwekwara ngalaba teknụzụ ya ebe ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ụdị ama ama na ụdị nke laptọọpụ egwuregwu. N'oge Black Friday ị ga-ahụ onyinye na HP Omen, ASUS, Lenovo Legion, MSI, wdg. Ị gaghị ahụ ọnụ ahịa dị mma dị otú ahụ n'ime afọ ndị ọzọ, yabụ were ohere iji nweta nke gị na ụlọ ahịa anụ ahụ ọ bụla ma ọ bụ tụọ ya na webụsaịtị ya.
mediamarkt: yinye ọpụrụiche na teknụzụ sitere na German nwekwara ọmarịcha kọmpụta egwuregwu. Ọtụtụ n'ime ha ga-ere ere n'oge Black Friday, iji chekwaa nnukwu ego na "abụghị onye nzuzu." Cheta na ị nwere ike ịzụta ọtụtụ ihe na ebe nrụọrụ weebụ ha ka ha nwee ike iziga ya n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ha na-ere ere na mpaghara Spanish.
Laptọọpụ Black Friday
Cyber ​​​​Monday na laptọọpụ
Laptọọpụ iji nye na ekeresimesi
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Mgbidi » Laptọọpụ egwuregwu Black Friday